कामुक माईजुसंगको चिकाईको मज्जा
माईजु आउनुहुन्छ भनेर आज म ३ बजे नै बसपार्क पुगेको थिएँ । चितवनबाट उहाँ झण्डै साँझको पाँच बजे आईपुग्नुभयो । एकछिन त म उहाँलाई हेरेको हेर्यै भएँ, किनकी खुला स्ट्रेट कपाल अनि टाइट जिन्स र टि-शर्टमा माइजूका ठूला ठूला दुधका पोकाले उहाँलाई २९-३० बर्षकी हट तरुनी जस्तो देखिएको थियो । रीना र माइजूलाई सँगै राख्ने हो भने दिदी बहिनी भन्न सुहाउने ज्यान थियो । मेरो त लाँडो ठनक्क भयो त्यसैले मैले सिधै माइजूलाई भनिदिएँ - “माइजू तपाईं त साह्रै हट देखिनुभा’छ कस्तो मेन्टेन गर्नुभाको हो फिगर त?” “छ्या भाञ्जा पनि...!” माइजूको यही जवाफले मलाई झनै उत्साहित बनायो ।
त्यसपछी मैले माइजूलाई ट्याक्सीमा राखेर कोठामा लिएर आए । माइजूलाई रिनाको कोठामा छिराएर फ्रेस हुनु भन्दै म आफ्नो कोठाभित्र छिरेर माइजूको चर्तिकला हेर्नलाई केमरा अन गरें । माइजूले त्यहींनै ढोका नलगाईकन आफ्नो टि-शर्ट खोल्नु भयो अनि क्रमशः पेन्ट त्यसपछी ब्रा र पेन्टी पनि खोल्नुभयो । साँच्चिकै चिक्न लायक शरीर थियो माइजूको । पोका त टाइट अनि बाटुलो भर्खरकी तरुनीको जस्तो । म झनै अचम्मित भएँ जब माइजूले आफ्नो सफाचट पुतीतिर हात पुर्याएर पुतीबाट केही निकाल्नुभयो । वाफ रे माइजूले त पुतीबाट डिल्डो निकालेर मुखमा पुर्याउनुभयो । अनि डिल्डो पुरै चाटेर बाथरुममा छिर्नु भयो । म पनि हतार हतार आफ्नो बाथरुम छिरेर नुहाएँ र ट्राउजर र टि-शर्ट लगाएर बाहिर निस्किएँ । माईजु अझै पनि बाथरुममा हुनुहुन्थ्यो ।
माइजू लगभग ४० मिनेटपछी बाथरुमबाट नाङ्गै निस्किनुभयो र झोला खोलेर कपडाहरु निकाल्नुभयो । त्यसपछी उहाँले पेन्टी लागाउनुभयो अनि ब्रा लगाउनु भयो । माथि पहेंलो टि-शर्ट लगाएपछी फेरी खोल्नुभयो र ब्रा फुकालेर बिना ब्रा टि-शर्ट लगाउनु भयो । त्यसपछी पेन्टी खोलेर पातलो डोरी जस्तो थोङ्ग निकालेर लगाएपछी जामा टाइपको स्कर्ट लगाउनुभयो । अब मैले उचित मौका खोज्नु थियो त्यसैले माइजू भएको ठाँउ पुगें र भनें “माइजू खानामा के खाने भन्नुस् ?” “जस्तो तपाईंलाई ईच्छा लाग्छ त्यही खाने नि भाञ्जा !” यति भन्दै गर्दा माइजूको आँखा रीनाको टेबुल माथि छरिएका कण्डमहरुमा पुग्यो । माइजूले शंकित नजर घुमाउनुभयो । उहाँले शायद मसँग अथवा म नभएको मौकामा रीनाले कोठामै कसैसँग चिकाउँछे भन्ने बुझ्नुभयो । अनि मैले माइजूको नजरलाई पत्तो नपाएझैं गरि किचनमा जान्छु भन्दै लागें । मेरो पछिपछि माइजू आउनुभयो । “कुन चिज कहाँ छ भन्नुस्! खाना म बनाउँछु ?” भनेपछी मैले माइजूलाई किचनको सबै जानकारी गराएँ र भनें “माइजू, तपाईं बियर पिउनुहुन्छ कि वाइन!” माइजूले वाइन पिउनु हुन्छ भन्ने कुरा मलाई रीनाले भनि सकेकी थिई, माइजूले पनि वाइन पिउने संकेत दिनुभयो ।
केहिबेर म टि.भी. हेर्न बसें, एक घण्टा जस्तो समयपछि माइजू मैले टि.भी. हेरेको ठाँउमा आउनुभयो र भन्नुभयो “खाना त तयार भयो भाञ्जा के गर्ने ?” “यति छिट्टै त के खाना खाइहाल्नु र माइजू!” भन्दै फ्रिजबाट रेड वाइन निकालें, अनि टि.भी.को मुनि भएको र्याकबाट काजु र बदाम निकालेर टेबुलमा राखें । माइजू कमर मट्काउँदै किचनमा गएर ग्लास लिएर आउनुभयो । मैले दुवै ग्लासमा वाइन राखें र एउटा ग्लास माइजूलाई दिंदै भनें “साँच्ची माइजू तपाईं मेरो माइजू नभएको भए ...” “माइजू नभएको भए के...?” उहाँले सोझो प्रश्न गर्नुभयो । “गर्ल फ्रेण्डको प्रोपोज गर्थें...।” मैले जिस्किँदै जवाफ दिएँ । उहाँ लजाउँदै बोल्नुभयो - “म यस्ती बुढी आइमाईलाई नजिस्क्याउनु न भाञ्जा ।” “होइन माइजू तपाईं र रीनालाई सँगै राख्ने हो भने सबैले दिदी बहिनी भन्ठान्छन् ? ४५ बर्ष भन्न सुहाउँदैन ।” “छ्या भाञ्जा आफ्नै माइजूलाई लाइन मार्नु हुन्छ...” माइजू ट्रयाकमा आइसक्नु भएको थियो ।
हामीले तिन ग्लास जति वाइन पिइसकेका थियौं । अलि अलि रमरम भइसकेको थियो । मैले टि.भी.मा च्यानल चेञ्ज गर्न थालें र स्टार मुभिजमा जेम्स बाण्डको फिल्म आइरहेको रहेछ । मैले त्यहीँ स्टप गरें । मलाई थाहा थियो कि जेम्स बाण्डको मुभिमा बेड सिन हुन्छ नै, त्यसको प्रतिक्रिया माइजूले कसरी गर्नु हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु थियो । माइजूले बसाइमा अप्ठेरो भए जस्तो गर्दै स्कर्ट घुँडा माथि सारि सक्नुभएको थियो । जब बेड सिन आयो तब माइजूले मैले नदेखेझैं गर्दै आफ्ना दुई हातले दुवै पोका समाएर एक-अर्कामा जुधाउनु भयो र टि-शर्ट मिलाए झैं गर्नु भयो । त्यसपछी माइजूले “भाञ्जा! मलाई एउटा कुरा नढाँटी भन्नुस् है ?” “के माइजू?” “यहाँ रीनासँग को को आउँछ?” “खोई कोही आको जस्तो मलाई लाग्दैन, किन र माइजू?” “उसको कोठामा थुप्रै कण्डमहरु देखें मैले त्यहि भएर ?” यो अति नै उत्तम मौका थियो मेरो लागि, मैले ठाडै भनि दिएँ “त्यो त मैले प्रयोग गर्न ल्याएको हो माइजू!” “दुई दिनलाई त्यति धेरै चाहिन्छ त ?” “दुई दिनलाई होइन माइजू सधैंजस्तो चाहिन्छ मलाई त?” “त्यसो भए रीना कहाँ सुत्छे त?” “छ्या माइजू ! मैले प्रयोग गर्ने कण्डम रीना को कोठामा भेटिएपछी पनि रीना कहाँ सुत्छे भन्नु हुन्छ? रीना म सँगै सुत्छे नि !” माइजुको लागी यो साह्रै ठूलो झट्का थियो ।
“के ? रीना र तपाईं… के सुन्नुपर्यो यो कानले” “केही होइन माइजू रीना जवानी खेर फाल्न नचाहने अनि बाहिरका मान्छेसँग सुतेर भन्दा म र निलसँग सुतेर सुरक्षित हुन खोजेकी मात्र हो ।” “छ्या तपाईं सम्झाउन पर्ने मान्छे भएर उल्टै ?” सही झटारो हान्ने बिचारले “धत् माइजू पनि रीनाले त तपाईंको उदाहरण दिदैं हामीलाई कन्भिन्स गरेकी केही भन्यो तपाईंलाई बिचमा ल्याउँथी भन्थी ममीले गावैँसँग चिकाउन हुन्छ मैले त के गरेकी छु र ? अनि यो उमेरमा त तपाईं पुतीमा डिल्डो छिराएर दिन भरी बाहिर निस्कनु हुन्छ भने ऊ त भर्खर २३-२४ कि भएकी छे ।” “कसले भन्यो तपाईंलाई मैले डिल्डो छिराएर हिंड्छु भनेर?” “माइजू! तपाईंले अघि मात्र लगाएको ब्रा र पेन्टी खोलेर तल पुतीमा आनन्द रहिरहोस् भनेर थोङ्ग लगाउनु भा’छ, मेरो कोठामा बसेर सबै कोठाको निगरानी गर्न मिल्छ । मसँग पनि मस्तको लाँडो छ हेर्नुस् तपाईं नाई भन्नुहुन्न....।” अनि ट्राउजर झ्वाट्ट तल सारें र फन्फनाउँदै गरेको लाँडो माइजूलाई देखाउँदै माइजूको पोकामा हात लगेर गजबले निचोर्न थालें । माइजू अक्क न बक्क पर्नु भयो “माइजू... जिन्दगीमा सधैं भर चिक्न पाईदैंन त्यही भएर पाएसम्म चिक्न छोड्नुहुन्न चाहे त्यो आफन्त होस् या जोसुकै...” अनि हातलाई माइजूको स्कर्ट भित्र छिराएर पुतीमा घर्षण दिन थालें साथमा मुखमा मुख जोडेर टङ्ग किस पनि । माइजूले तुरुन्त मलाई किसमा साथ दिन थाल्नु भयो ।
एकछिनको किस सकेर माइजूले सोध्नु भयो “अनि रीनालाई मात्र चिक्नु हुन्छ कि नीता भाञ्जीलाई पनि...” मैले रीना र नीतालाई चिकेको भिडीयो लगाएर भनें “ल! छोरी र भाञ्जीलाई चिकेको भिडीयो हेर्दै मसँग चिकाउनुस्...” भिडीयो मा मैले रीनाको पोका खेलाउँदै पुती चाटि रहेको र नीता मेरो लाँडो चुसि रहेको दृष्य आइरहँदा मैले माइजूलाई “माइजू! चुस्नुस् मेरो लाँडो शायदः तपाईंको पुतीले यस्तो लाँडो कमै मात्र भेट्यो होला" भनेँ । “हो भाञ्जा हो... यति मस्तको लामो र मोटो लाँडो त मैले ज्वाईं साबको र हजुरको मात्रै पाएँ । निलको लामो छ तर मोटो छैन गाँउमा एउटा दमैको पनि यस्तै मोटो थियो तर लम्बाइ थोरै कम थियो... हुन त म यहाँ तपाईं कै लाँडो चाख्नलाई आएकी हुँ रीना नभएको मौका पारेर...” “मतलब, माइजू निलले पनि हजुरलाई चिकि सक्यो...” “निलले त मलाई यही फ्ल्याटमा तिन महिनासम्म रण्डीलाई चिक्दाझैं चिक्यो नि... एकदमै फोहोरी बोल्ने अनि शारीरिक यातना दिई-दिई चिक्ने उसको रहर थियो । मलाई त कोठामा बस्दा कपडा लगाउनै दिन्नथ्यो...” “निललाई फकाउनु भयो कि कसरी चिकाउनु भयो माइजू...?”
“एकदिन गाँउको करेसामा पिशाब फेर्दै गर्दा निलको लाँडो देखें अनि त मेरो पुती चिलाउन थालि हाल्यो नि... त्यसको लगत्तै पढ्नको लागि निल यहाँ आउने भयो र म पनि उसँगै उसको बन्दोबस्त मिलाउन भनेर आएँ नि! यहाँ आए पछाडी मैले कमर दुखेको बहाना बनाएर उसलाई मालिस गर्न लगाएँ मालिस गर्दा गर्दै मैले उसको हातलाई चाक तिरबाट पुती तिर पुर्याएर बढी दुखेको यहीं छ भन्दै मालिस गर्न लगाएँ, एक छिनसम्म पुतीको वरपर मालिस गरेपछी मैले उसको हात समातेर पुती भित्रै छिराइदिएँ । मेरो पुतीले पानी छोड्न थालिसकेको थियो । उसको हातले मेरो पुतीमा आनन्द भइरहेको थियो त्यसपछि त उसलाई पनि रमाइलो लाग्न थालेछ क्यार मलाई औंलाले चिक्न थाल्यो म त मस्त भई आफ्नै पोका समाएर खेलाउदैं उसको मुखसम्म पुर्याइदिएँ । जब उसले मेरो दुध चुस्न सुरु गर्यो तब मैले उसको लाँडोमा हात लगेर आफू निस्केको ठाँउमा आमाको इच्छा पुर्याइदे भनेछु, त्यति भए पछि के चाहियो र जवान केटा र प्यासी आमाको बिचमा…।”
माइजूले यति भन्दासम्म मैले उहाँको टि-शर्टलाई माथि सारि सकेर एउटा हातले पोका निचोरिरहेको थिएँ भने अर्को हातका औंला माइजूको थोङ्गको डोरीले पुती घोट्दै थिएँ । माइजूले मेरो लाँडो च्याप्प हातले समाएर खेलाउन थाल्नु भयो, मैले पूनः माइजूको मुखमा मुख जोडेर टङ्ग किस खाएँ । करिब दुई मिनेट लामो नन स्टप टङ्ग किस पछी माइजूले मेरो मुखबाट आफ्नो मुख छुटाउनु भयो । ढिला नगरी लाँडो मुखमा छिराएर भित्र बाहिर गर्न थाल्नुभयो । बेला बेलामा मैले माइजूको टाउकोलाई समाएर लाँडोको जरासम्म मुख धकेलिदिन्थे । लाग्थ्यो लाँडो माइजूको घाँटीमा रहेको तर्कुले नाघेर भित्रै छिर्दैछ । गलप गलपको त्यो आवाज मलाई मजा लागिरहेको थियो, चार-पाँच मिनेटको चुसाईपछी मैले माइजूलाई सोफामा पल्टाएँ र स्कर्ट पुरै माथि सारेर पुतीमा किस गरें अनि लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गरें । माइजू आस्वाभाविक रुपमा ब्लु-फिल्मकी रण्डीलेझैं आवाज निकाल्दै मलाई साथ दिन थाल्नुभयो, तिन मिनेटको त्यो क्रमलाई माइजूले रोक्नुभयो र पूनः लाँडो मुखमा छिराएर चुस्न थाल्नुभयो । केहिबेर लाँडो चुसेपछी माइजूले मलाई सोफामा बसाएर मेरो काखमाथि आउनुभयो र मेरो लाँडोको टुप्पो समाएर पुतीको मुखमा डोहोर्याउनुभयो अनि मेरो काखमा मच्चिन सुरु गर्नुभयो । म भनें माइजूका पोकालाई टि-शर्ट माथिबाटै खेलाउन थालें । त्यही आसनमा घरि घरि माइजू र म मुख जोड्न भ्याउथ्यौं ।
आसन परिवर्तन गर्दै गर्दै हामी झण्डै आधा घण्टासम्म चिकाचिकी खेल्दै रह्यौं । माइजू र म दुवै जन्मजात नाङ्गै भइसकेका थियौं । भिडियो स्क्रिनमा मैले नीताको मुखमा फुसी झार्दै गरेको दृष्य चलिरहेको थियो । माइजूले पनि मुखमा झार्ने संकेत गर्नुभयो र मेरो लाँडो पूनः मुखमा छिराएर चुस्न थाल्नुभयो । केहि बेरमै मेरो लाँडोबाट पिचिक्क गर्दै फुसीको धार छुट्न थाल्यो ।केहि माइजूको मुख भित्रै झर्यो भने केहि ओंठ, गाला र निधारमा झर्यो । केहि चाँही दुधको पोकामा झर्यो । माइजूले मेरो लाँडोको रस चुसेर सबै मुखमा लिनु भयो भने मैले गाला र निधारमा झरेको फुसी औंलाले सम्हाल्दै माइजूको मुख भित्र पुर्याउन थालें । त्यसपछी मैले माइजूलाई अँगालेर सोफामा बसें अनि माइजूको मुखमा किस गर्दै भनें “अब खाना खाने हो कि चिकौरी माइजू... आज रातीलाई पनि त बाँकी राख्नुपर्यो होला...?” “तपाईंले मेरो एउटा काम गरिदिनु हुन्छ त भाञ्जा...?” “भन्नुस् न!” “म यहाँ बसुञ्जेलसम्म कम्तीमा पनि हरेक दिन इच्छा लागेको बेलामा चिक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो...!” भइहाल्छ नि माइजू भनेर त्यसपछी हामी नाङ्गै नै किचनमा छिर्यौं र खाना खान थाल्यौं ।
खाना खाइवरी माइजूलाई मेरो कोठामा सुत्न आउनु भन्दै कोठामा आएँ र लाँडोलाई क्रिम लगाएर मुठार्न थालें । आधा घण्टा जस्तोमा माइजू काम सकेर मेरो कोठामा आउनु भयो, मैले क्रिम लगाएको देखेर भन्नुभयो “मेरो पोकामा पनि क्रिम लगाउनु पर्ने भाको छ..” “आउनु न म लगाइ दिइहाल्छु नि, अहिले फेरी आफैंले खेलाउने पोका हो...” अनि मैले माइजूलाई बेडमा तानेर सुताइ दिएँ त्यसपछी क्रिम हातमा लिएर पोकामा दल्दै उनको पुती चाट्न थालें । माइजू एकै छिनमा सन्किएपछी मैले ठन्केको लाँडो उनको पुती भित्र घुसाएर मच्चिन थालें । स्क्रिनमा हाम्रो आफ्नै चिकाई रेकर्ड भइरहेको थियो, त्यो कुरा सुनेर माइजू झनै उत्साहित मसँग चिकाउन थालिन् । घरि चुसाउदैं घरि चिक्दै गरि हामीले कहिले तल कहिले माथिको क्रमलाई पनि परिवर्तन गर्दै रह्यौं । यसपाली फुसी झर्ने बेलामा मैले लाँडोलाई माइजूका दुई पोकाको बिचमा आफ्नो लाँडो राखें र पोका अठ्याएर लाँडोलाई अगाडी-पघाडी गर्न थालें । माइजूको निधार देखि पोका सम्म फुसीको धार लाग्यो र माइजूले त्यसलाई सोहोर्दै मुख भित्र पुर्याइन् । बिहान मेरो निद्रा खुल्दा माइजूको न्यानो मुख भित्र मेरो लाँडो थियो ।
माइजू मेरो लाँडोलाई बडो प्यारो गरि चुस्दै हुनुहुन्थ्यो । घरिघरि घाँटीको जरासम्म माइजूले मेरो लाँडो निल्दा मलाई सनक्क बनाउँथ्यो । केहि बेरमै मैले माइजूलाई लाँडोबाट छुट्याएर मेरो परस्परमा ल्याँए र टङ् किस लिँए तर टङ् किस लिदै गर्दा माइजूले मेरो लाँडोलाई हातले समातेर आफ्नो पुतीभित्र छिराउनुभयो । मैले पनि किस कै दौरानमा माइजूलाई तलबाट कमर उचालेर दनक दिन थालें । त्यो गतीमा चिक्दै गर्दा मेरो लाँडो पुतीबाट चिप्लिएँझैं हुन्थ्यो । मैले गती अझै बढाँए जसले गर्दा लाँडो पुतीको फाँकाभन्दा पनि बाहिर आयो । त्यसपछि मैले लाँडोलाई आफ्नै हातले समातेर पुतीमा दल्दै भित्र छिराउन लागेको जस्तै गर्दै एकछिनसम्म पुतीको बाहिरी भागमा दल्दै रहें र अचानक सँग माइजूको चाकमा ठेलिदिंए ।
आधा लाँडो चाकभित्र छिरिसकेको थियो । माईजू पीडा मिश्रीत आवाजमा मलाई लाँडो निकाल्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले भनें “पहिलो पटक त पक्कै होइन क्यारे अलि मोटो मात्र त हो नि भन्दै ठेलें । माइजु “आ..अ....अ.... अलि विस्तारै गाँड फाट्ला भानिज...” भन्दै आफूलाई सम्हाल्न सुरु गरिन । “जे सुकै परोस, अनि माइजूको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर थुन्दै धमाधम धकेल्दै गती तिब्र बनाएँ । माइजूको आँखाबाट आँशु निस्कन थालिसकेको थियो । मैले त्यसमा सहानुभुती देखाएको खण्डमा काम हुँदैनथ्यो त्यसैले गती कम नगरीकन चाकमा चिक्दैरहें । केहि बेर मै माइजूले पनि मलाई साथ दिन थाल्नुभयो । केहिबेर चाकमा चिकेपछि मैले लाँडो बाहिर निकालें । हत्तपत्त माइजूले मेरो लाँडोलाई हातले समाएर मुख नजिकै लानुभयो र मुखबाट प्रशस्त थुक निकालेर मेरो लाँडोमा दल्नुभयो । मेरो लाँडो हल्का सफा भएपछी माइजूले लाँडो मुखभित्र छिराएर चुस्न सुरु गर्नुभयो । म भने माइजूको पुतीमा औंला छिराएर खेल्न थालें । लाँडो चुस्दै गर्दा मैले माइजूको पुतीलाई आफ्नो मुख नजिक ल्याएँ र पुतीमा जिब्रोले चाट्न थालें साथै माइजूको दुध पनि माड्न थालें । निकै बेर दुध माड्दै पुती चाटेपछि “माइजू! खै चाक सोझ्याउनु... फेरी चिक्छु...!” “नाई! भानिज! भो अब नाई...” “ठिकै छ त्यसोभए पुती फेस्याउनु न त?” त्यसपछी माइजूले भर छैन भन्दै मेरो लाँडो माथि पुतीको प्वाल सोझ्याउँदै बसिन् र तल माथि गर्दै उफ्रिन थालिन् म दुधको पोकालाई सक्दो बल लगाएर माड्न थालें । एकछिन लाँडो माथि उफ्रेपछि माइजू थकित भएर मेरो छातिमा पल्टिनुभयो ।
मैले मौकाको सदुपयोग गर्दै माइजूलाई किस गर्दै बेडमा ठ्याक्कै उल्टाएँ । त्यति बेला पनि मेरो लाँडो पुती भित्रै थियो । माइजूको माथि रहेर मैले माइजुलाई चिक्दै रहें । माइजू अति आनन्दित मुद्रामा आँखा बन्द गरि रहेको मौका पारेर मैले पूनः चाकमा लाँडो छिराएर धमाधम चिक्न थालें । माइजूले “जति भने पनि नलाग्ने, अर्काको ज्यान त केही होइन झैं गर्ने ...।” “जुन पुतीले १०० भन्दा बढी लाँडो चाखि सकेको छ, त्यो पुतीलाई रण्डीको पुती भन्दा हुन्छ । झन यो पुती त घरमा सबैको साझा पुती नै भएको हो भने चिक्नलाई फ्रेश प्वाल चाहियो नि त ?” “लौ जे गरे नि गर्नुस् यो रण्डीलाई, तपाईसँग चिकाउनलाई आएकी हुँ क्यारे जसरी चिके नि चिक्नुस् !” त्यसपछी माइजूको चाकमा मैले १० मिनेटसम्म लाँडो पेल्दै रहें । फुसी झर्ने बेलामा मैले लाँडो निकालेर माइजूको निधारमा पुर्याँउदै भने “आज तपाईको सिँउदो भरि दिन्छु मेरो लाँडे झोलले...” अनि माइजूको सिउँदोमा फुसीको पिचकारीले सेतो धर्को बनायो । बाँकी फुसी झर्न रोकेर मैले माइजूको मुखमा लाँडो छिराँए अनि बाँकि सम्पूर्ण फुसी मुखभित्र झारि दिएँ ।
माइजूले लाँडो पुरै भित्र छिराएर मलाई अद्भुत आनन्द अनुभुत गराएपछी मैले माइजूलाई ऐना अगाडी उभ्याएर पछाडीबाट पोका समाउँदै सिउँदो देखाइदिएँ । माइजूले परक्क मुहार फर्काएर मलाई किस गर्नुभयो । त्यहीँ पोजिशन मै माइजूलाई मैले बाथरुम पुर्याएँ र कमड माथि बसाएर मुखमा लाँडो सोझ्याएँ अनि मेरो लाँडोबाट पिशाबको धार छुट्दै माइजूको मुहार हुँदै सारा शरिर भरी भिजाइदिएँ । पिशाबले लतपत माईजूलाई उठाएर सावर मुनि पुर्याउँदै मैले माइजूको नुनिलो ओंठमा ओंठ जोडेर थुक साट्न थालें । त्यसपछी सावर खोलेर हामी दुवैले नुहायौं । अफिस जानुअघि मैले माइजूको पोका निचोर्दै टङ् किस दिदैं भने “भरे एकदम प्वाँट भएर बस्नुस् !”
बाकी कथा पछिल्लो भागमा… कृपया यश वेवसाइटलाई बुकमार्कमा सेभ गर्न र दिनहुँ भिजिट गरिराख्नुहोला ।
कामुक माईजुसंगको चिकाईको मज्जा 2017-06-13T21:12:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: कामुक माईजुसंगको चिकाईको मज्जा